Waraysi Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya - BBC Somali - Warar
Waraysi Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 24 Febraayo, 2013, 12:02 GMT 15:02 SGA
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa war
Waxaa shir jaraa'id maanta ku qabtay garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde ee magaalada Muqdisho Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Prof Maxamed Cismaan Jawaari. Waxaan uu faahfaahin kaga bixiyay socdaal uu ku soo maray dalalka Itoobiya iyo Kenya.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari.
Gudomiyaha ayaa la kulmay Baarlamaanka Federaalka ee Itoobiya iyo siday labada Baarlamaan ay iskula shaqayn lahaayeen iyo nabadaynta gobolka. Waxaa Gudoomiayaha martiqaaday Madaxweynaha iyo Baarlamaanka gobolka Soomaalida Itoobiya. Gudoomiyaha wuxuu booqday Jigjiga, Wuxuu BBC u sheegay in aan la iska indho tiri karin dowlad goboleedka Soomaalida ee dalka Itoobiya oo dhan Soomaali kala barkeeda. Jawaari ayaa sheegay in Baarlamaankoodu uu daneynayo in ay booqdaan meel kasta oo ay ku nool yihiin muwaadiniinta Soomaaliya hadii lagu casuumo xitaa ay tahay Timbukto iyo meel kalaba. Waxaa wareystay wariyaha BBCda ee Muqdisho Maxamed Ibraahim Macalimuu.